အမူအရာမဲ့ မျက်နှာနဲ့ စကားပြောတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လန်ကျန့် တစ်ဖြစ်လဲ ဝမ်ရိပေါ် (Wang Yibo)အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း – For her myanmar
Posted on July 15, 2019 July 15, 2019 Author Ei Mon	Comment(0)
ဟိတ်.. The Untamed ထဲက အဆင်တွေ ကြားထဲ လမ်းပျောက်နေတဲ့ ယောင်းလေးတွေ ရှိလား?
The Untamed ရဲ့ မူရင်း ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ Mo Dao Zu Shi (Grandmaster of Demonic Cultivation) ဟာ BL ဝတ္ထုပါ။ BL ဆိုပေမဲ့လို့ ဝတ္ထုတစ်အုပ်လုံးဟာ ခိုင်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ၁၃နှစ်ကြာတဲ့ သစ္စာတရားအကြောင်း အသားပေးဖော်ပြထားတာမို့ ဖြူဖြူစင်စင်လေး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဝတ္ထုပါ။ Skinship ဆိုတာကလည်း ဇာတ်သိမ်းထိ ၂ခန်းအပြင် ပိုမပါဘဲ Extra ကျမှသာ ၁ခန်းလောက် ထည့်ရေးထားတာမျိုးဆိုတော့ တကယ်ကို ဖြူဖြူသန့်သန့်လေး ဖတ်လို့ရတာမျိုးပေါ့..
ခက်တာက တရုတ်က BL တွေဆို မကြည်ဘူးဟုတ်? သူ့ဟာသူ ဘယ်လောက် ဖြူတယ်ပြောပြော BL ဆို ဘန်းမှာပဲဆိုတဲ့ အခြေအနေဆိုတော့ ဒီဝတ္ထုကို Donghua (Anime) ပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း Bromance အနေနဲ့ပဲ ရိုက်ခဲ့ရသလို ခု The Untamed ဟာလည်း Bromance အနေနဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်သောသူ မြင်၏ ဆိုသလို သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ Team Member တွေရဲ့ ထူးချွန်မှုကြောင့် တချို့နေရာလေးတွေမှာ ညီအစ်ကို မေတ္တာထက် ပိုတဲ့ အရိပ်အယောင်လေးတွေကို တွေ့မြင်ခံစားရတာမို့ Fan တွေကြားထဲ ဝက်ဝက်တွေကွဲပေါ့ရှင်.. (ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေး Support ကြဖို့ဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပေမဲ့ ထပ်ပြီးသတိပေးပါရစေနော်.. ဘန်းခံရမှာ စိုးလို့ပါ.. :'( )
အဲဒီမှာ အဓိက ဇာတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ လန်ကျန့် နဲ့ ဝေ့ရင်း (လန်ဝမ့်ကျီး နဲ့ ဝေ့ဝူရှမ်း၊ ဟန်ကွမ့်ကျွင်း နဲ့ ရီလင်းလောင်ဇူ.. စုံပြီထင်တယ် နာမည်တွေ :3 ) နေရာက သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဝမ်ရိပေါ် (Wang Yibo) နဲ့ ရှောင်းကျန့် (Xiao Zhan) တို့ရဲ့ အကြည့်တွေက အသက်ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ မင်မင်က ယောင်းတို့တွေအတွက် ဝမ်ရိပေါ်လေးရဲ့အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
ရိပေါ်ကိုတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ မွေးပါတယ်။ (ဖူးစာရှင်ကို ၂ နှစ်လောက် ငယ်ပြီး လွှတ်လိုက်လားတောင် အောက်မေ့ရတယ် :P) တောင်ကိုရီးယား နဲ့ တရုတ် Boyband ဖြစ်တဲ့ UNIQ ရဲ့ Maknae (အငယ်ဆုံး) လေးဖြစ်ပြီး Main Rapper ၊ Main dancer နဲ့ Visual ဖြစ်ပါတယ်။ Main Dancer လို့ မပြောရ.. အကကလည်း အရမ်းတော်တာကိုး… သူ့ကို ကတာ မိုက်တယ်လို့ ချီးကျူးရင်လည်း အရမ်းကို သဘောကျပါသေးသတဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
ငယ်လေးကတည်းက အကပညာကို သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၁၊ သူ အထက်တန်း ဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ IBD အကပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ထိပ်ဆုံး ၁၆ ယောက် စာရင်းထဲ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းတော့ Yuehua Entertainment ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး YG လက်အောက်မှာ Trainee ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ ရိပေါ်ဟာ Uniq အဖွဲ့ရဲ့ Member အဖြစ် Falling in Love အယ်လ်ဘမ်နဲ့ Debute လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ YG နဲ့ Yuehua လက်အောက်က ဖြစ်ပြီး မန်ဘာဝင်တွေကလည်း တရုတ်နဲ့ ကိုရီးယား လူမျိုးတွေမို့ ရိပေါ်ဟာ တရုတ်၊ ကိုရီးယား နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပါသတဲ့ကွယ်… (Uniq Life မှာ သူခေါက်ဆွဲပြုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကြည့်ပြီး မင်မင်တော့ တအားတွေ အားကျမိ T.T )
Related Article >>> တေလာဆွစ်ဖ် အတွက်နဲ့ ဂယက်တွေ ထနေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ ဂီတလောက
ရိပေါ်က ဂီတဘက်မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်လာပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၆ ကနေစပြီး Day Day Up ဆိုတဲ့ တရုတ် Talkshow မှာ Host အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ (အဲ့ Show လေး မကြည့်ဖူးရင် ကြည့်ကြ ယောင်းတို့… ဝမ်ရိပေါ်တို့ ချေတဲ့အကြောင်းတွေ မင်းသမီးတွေဆီက ကြားရမှာဖြစ်ပြီး ထိန်းမနိုင်ယွစိန်လေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကိုတော့ တခြား Host တွေနဲ့ နေရင် မြင်နေရပါလိမ့်မယ် :’D )
၂၀၁၈ မှာတော့ Produce 101 မှာ Dance Mentor (အကနည်းပြ)အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (အား.. အဲ့မှာလည်း အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနော်… Mentees တွေ ဂျစ်သမျှ ခံရတာ.. ရှက်ကလည်း ရှက်သေး သူက :’D ) ၂၀၁၇ မှာတော့ Private Shushan Gakuen ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ အဓိက ဇာတ်ဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ ပထမဆုံး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းအနေတည်သလို စကားလည်း အရမ်းနည်းတော့ ခေတ်သစ် တေမိလေးအလား ထင်ရပေမဲ့ ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆို ရေပက်မဝင်အောင် ပြောပါတယ်တဲ့။ ရှောင်းကျန့်ပြောသလို “အနေတည်တယ်၊ စကားနည်းတယ်ဆိုတာ သူ အရေခွံခြုံထားတာ တကယ်တော့ ကလေးလေးပဲ” ဆိုတာမျိုး (ဟယ်.. မသိဘူး.. ကြုံတုန်း ပြောရတာပဲ 😛 ) ဒါတော့ ယောင်းတို့လည်း တွေ့မှာပါ.. The Untamed ရဲ့ ရိုက်ကွင်းတွေမှာဆို စလိုက်၊ နောက်လိုက်၊ ရှောင်းကျန့်ကို အနိုင်ကျင့်လိုက်၊ ကလိုက်နဲ့ မြင်နေရတာကိုး… Fashion King လို့ တင်စားထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်စားရတာကို သဘောတွေ့ပါသေးသတဲ့…
ရိပေါ်သဘောကျတဲ့ ကောင်မလေးစတိုင်ကတော့ cute နဲ့ sexy အရောပါတဲ့။ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ပိတောက်ဆို ပိတောက် သစ္စာရှိမယ့်သူကိုမှ ရွေးချယ်ချင်တာပါတဲ့နော်။ အစားအစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြေးများတာ မရှိသလို အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေကတော့ Ramen နဲ့ အသားပေါင်း ပေါက်စီ (Xiaolongbao )ပါတဲ့။ အကြိုက်ဆုံး အရောင်ကတော့ အစိမ်း ၊ အနီ ၊ အဖြူ ၊ အမည်း ပါတဲ့။
ရာသီဖွားကတော့ Leo ဖြစ်ပြီး သွေးအမျိုးအစားကတော့ A ပါ။ ခုချိန်ထိတော့ ပိုင်ရှင်မရှိသေးတဲ့ single လေးဖြစ်လို့ ဝမ်တိတိကို ချိန်လို့ ရပါသေးတယ်နော်။ အဲ.. စကားပြောရင်တော့ သတိထားပြီး ပြောမှ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်.. အဖြေသတ်တတ်လွန်းလို့ :/ ဥပမာ – ကြောင်က ဘယ်လိုပုံလဲဆို ကြောင်ပုံသိချင် Baidu မှာ သွားရှာလေ ဆိုပြီး ဖြေတတ်တဲ့အမျိုး.. လူ့ကန့်လန့်လေး :3 ဒါလည်း ချစ်ရတာပါပဲ.. 😀
ဒီလောက်ဆို ယောင်းတို့လည်း ကျေနပ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်…တခြား ဘယ်သူ့အကြောင်း သိချင်သေးလဲ.. ပြောပြဦးမယ် 😛
မင်မင်တော့ ဒီနေ့လာမယ့် The Untamed အပိုင်းသစ်မှာ ဖုန်ရှူဖို့ အဲလေ ငိုဖို့ တစ်ရှူးလေးဆောင်ပြီး စောင့်နေပါပြီနော်… သြော်.. မေ့လို့ ရိပေါ်ရဲ့ IG Account လေး ပေးဖို့ ကျန်ခဲ့တယ်.. သူ့ IG Account ကတော့ yibo.w_85 ပါတဲ့.. သွား Follow ပြီး Update တင်ရင် မင်မင့်ကိုလည်း လာပြောပေးကြပါဦး 😛 ထီထိုးမလို့ :3
Reference: wiki, aminoapps.com, celebstrendnow.com
ဟိတျ.. The Untamed ထဲက အဆငျတှေ ကွားထဲ လမျးပြောကျနတေဲ့ ယောငျးလေးတှေ ရှိလား?
The Untamed ရဲ့ မူရငျး ဝတ်ထုဖွဈတဲ့ Mo Dao Zu Shi (Grandmaster of Demonic Cultivation) ဟာ BL ဝတ်ထုပါ။ BL ဆိုပမေဲ့လို့ ဝတ်ထုတဈအုပျလုံးဟာ ခိုငျမွဲတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ ၁၃နှဈကွာတဲ့ သစ်စာတရားအကွောငျး အသားပေးဖျောပွထားတာမို့ ဖွူဖွူစငျစငျလေး ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ဝတ်ထုပါ။ Skinship ဆိုတာကလညျး ဇာတျသိမျးထိ ၂ခနျးအပွငျ ပိုမပါဘဲ Extra ကမြှသာ ၁ခနျးလောကျ ထညျ့ရေးထားတာမြိုးဆိုတော့ တကယျကို ဖွူဖွူသနျ့သနျ့လေး ဖတျလို့ရတာမြိုးပေါ့..
ခကျတာက တရုတျက BL တှဆေို မကွညျဘူးဟုတျ? သူ့ဟာသူ ဘယျလောကျ ဖွူတယျပွောပွော BL ဆို ဘနျးမှာပဲဆိုတဲ့ အခွအေနဆေိုတော့ ဒီဝတ်ထုကို Donghua (Anime) ပွနျရိုကျတဲ့အခါမှာလညျး Bromance အနနေဲ့ပဲ ရိုကျခဲ့ရသလို ခု The Untamed ဟာလညျး Bromance အနနေဲ့ ပှဲထှကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကွညျ့သောသူ မွငျ၏ ဆိုသလို သရုပျဆောငျတှနေဲ့ Team Member တှရေဲ့ ထူးခြှနျမှုကွောငျ့ တခြို့နရောလေးတှမှော ညီအဈကို မတ်ေတာထကျ ပိုတဲ့ အရိပျအယောငျလေးတှကေို တှမွေ့ငျခံစားရတာမို့ Fan တှကွေားထဲ ဝကျဝကျတှကှေဲပေါ့ရှငျ.. (ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျးလေး Support ကွဖို့ဆိုတာ သိပွီးသား ဖွဈကွမှာပမေဲ့ ထပျပွီးသတိပေးပါရစနေျော.. ဘနျးခံရမှာ စိုးလို့ပါ.. :'( )
အဲဒီမှာ အဓိက ဇာတျဆောငျတှဖွေဈတဲ့ လနျကနျြ့ နဲ့ ဝရေ့ငျး (လနျဝမျ့ကြီး နဲ့ ဝဝေူ့ရှမျး၊ ဟနျကှမျ့ကြှငျး နဲ့ ရီလငျးလောငျဇူ.. စုံပွီထငျတယျ နာမညျတှေ :3 ) နရောက သရုပျဆောငျတဲ့ ဝမျရိပျေါ (Wang Yibo) နဲ့ ရှောငျးကနျြ့ (Xiao Zhan) တို့ရဲ့ အကွညျ့တှကေ အသကျဖွဈလာတော့တာပါပဲ။ ဒီနမှေ့ာတော့ မငျမငျက ယောငျးတို့တှအေတှကျ ဝမျရိပျေါလေးရဲ့အကွောငျး တဈစတေ့စောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော..
ရိပျေါကိုတော့ ၁၉၉၇ ခုနှဈ သွဂုတျလ ၅ ရကျနမှေ့ာ မှေးပါတယျ။ (ဖူးစာရှငျကို ၂ နှဈလောကျ ငယျပွီး လှတျလိုကျလားတောငျ အောကျမရေ့တယျ :P) တောငျကိုရီးယား နဲ့ တရုတျ Boyband ဖွဈတဲ့ UNIQ ရဲ့ Maknae (အငယျဆုံး) လေးဖွဈပွီး Main Rapper ၊ Main dancer နဲ့ Visual ဖွဈပါတယျ။ Main Dancer လို့ မပွောရ.. အကကလညျး အရမျးတျောတာကိုး… သူ့ကို ကတာ မိုကျတယျလို့ ခြီးကြူးရငျလညျး အရမျးကို သဘောကပြါသေးသတဲ့ ယောငျးတို့ရေ…
ငယျလေးကတညျးက အကပညာကို သငျယူခဲ့ပွီး ၂၀၁၁၊ သူ အထကျတနျး ဒုတိယနှဈရောကျတဲ့အခါမှာတော့ IBD အကပွိုငျပှဲမှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ထိပျဆုံး ၁၆ ယောကျ စာရငျးထဲ ရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒီနောကျပိုငျးတော့ Yuehua Entertainment ကို ရောကျရှိခဲ့ပွီး YG လကျအောကျမှာ Trainee ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာတော့ ရိပျေါဟာ Uniq အဖှဲ့ရဲ့ Member အဖွဈ Falling in Love အယျလျဘမျနဲ့ Debute လုပျခဲ့ပါတယျ။ YG နဲ့ Yuehua လကျအောကျက ဖွဈပွီး မနျဘာဝငျတှကေလညျး တရုတျနဲ့ ကိုရီးယား လူမြိုးတှမေို့ ရိပျေါဟာ တရုတျ၊ ကိုရီးယား နဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျပါသတဲ့ကှယျ… (Uniq Life မှာ သူခေါကျဆှဲပွုတျတဲ့အပိုငျးလေးကွညျ့ပွီး မငျမငျတော့ တအားတှေ အားကမြိ T.T )
Related Article >>> တလောဆှဈဖျ အတှကျနဲ့ ဂယကျတှေ ထနတေဲ့ အနောကျနိုငျငံရဲ့ ဂီတလောက
ရိပျေါက ဂီတဘကျမှာ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ အောငျမွငျလာပွီးတဲ့နောကျ ၂၀၁၆ ကနစေပွီး Day Day Up ဆိုတဲ့ တရုတျ Talkshow မှာ Host အဖွဈ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ (အဲ့ Show လေး မကွညျ့ဖူးရငျ ကွညျ့ကွ ယောငျးတို့… ဝမျရိပျေါတို့ ခတြေဲ့အကွောငျးတှေ မငျးသမီးတှဆေီက ကွားရမှာဖွဈပွီး ထိနျးမနိုငျယှစိနျလေးဖွဈတဲ့ အကွောငျးကိုတော့ တခွား Host တှနေဲ့ နရေငျ မွငျနရေပါလိမျ့မယျ :’D )
၂၀၁၈ မှာတော့ Produce 101 မှာ Dance Mentor (အကနညျးပွ)အဖွဈ ပါဝငျဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါတယျ။ (အား.. အဲ့မှာလညျး အရမျးခဈြဖို့ကောငျးနျော… Mentees တှေ ဂဈြသမြှ ခံရတာ.. ရှကျကလညျး ရှကျသေး သူက :’D ) ၂၀၁၇ မှာတော့ Private Shushan Gakuen ဆိုတဲ့ ဇာတျကားမှာ အဓိက ဇာတျဆောငျမငျးသားအနနေဲ့ ပထမဆုံး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
အရမျးအနတေညျသလို စကားလညျး အရမျးနညျးတော့ ခတျေသဈ တမေိလေးအလား ထငျရပမေဲ့ ခငျတဲ့သူတှနေဲ့ဆို ရပေကျမဝငျအောငျ ပွောပါတယျတဲ့။ ရှောငျးကနျြ့ပွောသလို “အနတေညျတယျ၊ စကားနညျးတယျဆိုတာ သူ အရခှေံခွုံထားတာ တကယျတော့ ကလေးလေးပဲ” ဆိုတာမြိုး (ဟယျ.. မသိဘူး.. ကွုံတုနျး ပွောရတာပဲ 😛 ) ဒါတော့ ယောငျးတို့လညျး တှမှေ့ာပါ.. The Untamed ရဲ့ ရိုကျကှငျးတှမှောဆို စလိုကျ၊ နောကျလိုကျ၊ ရှောငျးကနျြ့ကို အနိုငျကငျြ့လိုကျ၊ ကလိုကျနဲ့ မွငျနရေတာကိုး… Fashion King လို့ တငျစားထားတဲ့အတိုငျးပဲ ဖကျရှငျကကြ ဝတျစားရတာကို သဘောတှပေ့ါသေးသတဲ့…
ရိပျေါသဘောကတြဲ့ ကောငျမလေးစတိုငျကတော့ cute နဲ့ sexy အရောပါတဲ့။ တဈယောကျဆိုတဈယောကျ ပိတောကျဆို ပိတောကျ သစ်စာရှိမယျ့သူကိုမှ ရှေးခယျြခငျြတာပါတဲ့နျော။ အစားအစာနဲ့ ပတျသကျပွီး ကွေးမြားတာ မရှိသလို အကွိုကျဆုံး အစားအစာတှကေတော့ Ramen နဲ့ အသားပေါငျး ပေါကျစီ (Xiaolongbao )ပါတဲ့။ အကွိုကျဆုံး အရောငျကတော့ အစိမျး ၊ အနီ ၊ အဖွူ ၊ အမညျး ပါတဲ့။
ရာသီဖှားကတော့ Leo ဖွဈပွီး သှေးအမြိုးအစားကတော့ A ပါ။ ခုခြိနျထိတော့ ပိုငျရှငျမရှိသေးတဲ့ single လေးဖွဈလို့ ဝမျတိတိကို ခြိနျလို့ ရပါသေးတယျနျော။ အဲ.. စကားပွောရငျတော့ သတိထားပွီး ပွောမှ အဆငျပွမေယျထငျတယျ.. အဖွသေတျတတျလှနျးလို့ :/ ဥပမာ – ကွောငျက ဘယျလိုပုံလဲဆို ကွောငျပုံသိခငျြ Baidu မှာ သှားရှာလေ ဆိုပွီး ဖွတေတျတဲ့အမြိုး.. လူ့ကနျ့လနျ့လေး :3 ဒါလညျး ခဈြရတာပါပဲ.. 😀
ဒီလောကျဆို ယောငျးတို့လညျး ကနြေပျလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ… မငျမငျတော့ ဒီနလေ့ာမယျ့ The Untamed အပိုငျးသဈမှာ ဖုနျရှူဖို့ အဲလေ ငိုဖို့ တဈရှူးလေးဆောငျပွီး စောငျ့နပေါပွီနျော… သွျော.. မလေို့ ရိပျေါရဲ့ IG Account လေး ပေးဖို့ ကနျြခဲ့တယျ.. သူ့ IG Account ကတော့ yibo.w_85 ပါတဲ့.. သှား Follow ပွီး Update တငျရငျ မငျမငျ့ကိုလညျး လာပွောပေးကွပါဦး 😛 ထီထိုးမလို့ :3
Tagged BL, Chinese, Lan Wangji, Live action, The Untamed, Wang Yi Bao
Paris Fashion Week ရောက် ဆယ်လီတို့ရဲ့ပုံရိပ်များ
Posted on September 28, 2018 Author Sugar Cane
ဆယ်လီတွေ သူ့ထက်ငါအပြိုင်လှနေတာ၊ လှနေတာဆိုတာလေ …..
Posted on September 15, 2018 Author Ei Mon
မမနဲ့ မောင်လေးဆိုတာ ဒလိုဖြစ်နေရမှာ 😀
ဇူလိုင်လက EXO-L တို့အတွက် ရင်ခုန်စရာ အပြည့်ပါနော်